သင်ဘယ်နေ့မှာ ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကို တွက်ချက်လို့ရတဲ့နည်း...! - APANNPYAY
/ သင်ဘယ်နေ့မှာ ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကို တွက်ချက်လို့ရတဲ့နည်း...!
သင်ဘယ်နေ့မှာ ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာကို တွက်ချက်လို့ရတဲ့နည်း...!
ကျွန်တော်တို့ ဂဏန်းဗေဒင်ပညာမှာ ဘယ်နေ့ကို ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို တွက်လို့ရတဲ့ တွက်နည်း ရှိပါတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က အွန်းလိုင်းမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ သူက ကျွန်တော့်ကို ဒီလို ပြောပါတယ်။
ဆရာတဲ့ အဘမင်းသိင်္ခ မရှိတော့ပေမယ့် ဆရာကြီးရဲ့ ပညာရပ်တွေကို အခုလို ဖြန့်ဝေပေးတာ
ကျေးဇူးပါပဲတဲ့။ ကျွန်တော်တို့က အဘမင်းသိင်္ခရဲ့ အဝေးရောက် တပည့်တွေဆို မမှားပါဘူးတဲ့။ ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခရဲ့ စာအုပ်တွေဆို မလွတ်တမ်းဖတ်တယ်တဲ့။ စာအုပ်ထဲမှာ ပါတဲ့ ဗေဒင်တွက်နည်းတွေဆို အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပြီး တွက်နေကြတဲ့။ မိတ် ဆွေတွေ အမတွေဆိုလည်း တွက်ခိုင်းလို့ အမြဲတမ်း တွက်ပေးနေကြတဲ့။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးအတွက် အရမ်းမှန်ကန်တဲ့ ဗေဒင်တွက်နည်း တစ်ခုရှိတယ်။ ဂဏန်းဗေဒင် တွက်နည်းပါဆရာ။ ဆရာတော့ သိမလား မသိဘူး။ ရောက်ဆဲ ရက် လ ခုနှစ်ထဲက ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရက် မွေးလ မွေးခုနှစ်ကို နှုတ်။ တစ်ခုထဲ ရအောင်ပေါင်းတယ်။ ရတဲ့ ဂဏန်းကို ကြည့်ပြီး ဒီနေ့က ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး။ ဘာဖြစ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို တွက်ယူလို့ရတဲ့ နည်းလေးပါ။ ဆရာ သိတယ် မဟုတ်လားဆိုတော့..
ကျွန်တော်ကလည်း သိတာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘ၀မှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စတွေဆိုရင် ဒီနည်းနဲ့ပဲ တွက်ကြည့်ပြီး လုပ်နေကြပေါ့လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ သူကလည်း အရမ်းမှန်တာပဲ ဆရာရယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အဲဒီနည်းနဲ့ တွက်ကြည့်လို့ မကောင်းဘူးဆိုရင် ဘာအလုပ်မှ မလုပ်တော့ဘူးတဲ။ အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်ကူးတစ်ခုရတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆိုက်ကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ အတွက် ဒီဏန်းဗေဒင် တွက်နည်းလေး တင်ရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့ ဖြူစင်သောနှလုံးဖြင့် ဒီပို့လေးကို တင်လိုက်တာ ဖြစ်ပါကြောင်း.......
တွက်နည်းကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ရောက်ဆဲ ခုလရက်ထဲကနေ မိမိရဲ့ မွေးရက် မွေးလ မွေးသက္ကရာဇ်ကို နှုတ်။ တစ်လုံးထဲ ရအောင်ပေါင်းပေါ့။ အောက်မှာ တစ်ကနေ ကိုးအထိ ဘာဂဏန်းရရင် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို အတိအကျ ရေးထားတဲ့ ဟောကိန်းတွေ ပါပါတယ်။ အားလုံးသောသူများ ကျေနပ် ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာ။
အကြံအစည်သစ်တွေ၊ လုပ်ငန်းသစ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံသစ်တွေ ရောက်လာလိမ့်မယ်။ အိပ်ယာကနိုးပြီး မျက်လုံး နှစ်လုံး ပွင့်ကတည်းက ငါ တစ်ခုခုတော့ ရတော့မှာပဲလို့ စိတ်မှာ ပိုက်ထားပါ။ မုချ တစ်ခုခု ရရှိပါလိမ့်မည်။
ဒီနေ့ဟာ ဘယ်သူတွေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကကြားကနေပြီး ၀င်ပြီး ဖြန်ဖြေပေးရတတ်တယ်။ ဝေးကွာနေတဲ့ လူနှစ်ယောက်အတွက် ကိုယ်က ဆက်သွယ်ပေးရတတ်တယ်။ ဒီနေ့ဟာ ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေပဲ ပြောပြော ကိုယ်ပြောသမျှကို ဘယ်သူကမှ မဟုတ်ဘူးလို့ မပြောပဲ လက်ခံ၇မယ့် နေ့ဖြစ်တယ်။ အမှန်ကတော့ ဒီနေ့ဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အုပ်စုနှစ်ခုကို ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်သွားအောင် ဖျန့်ဖြေပေးရတဲ့ နေ့မျိုးပဲ။ ပြီးတော့ ဘာကိုပဲ လုပ်လုပ် ကံတရားက ကိုယ့်ကို မျက်နှာသာပေးတဲ့နေ့မျိုး ဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ဟာ အူမြူးတဲ့နေ့ ဖြစ်တယ်။ ဘေးက ကိုယ့်ကို ကြည့်နေတဲ့ လူတွေတောင် အူမြူးလှချဉ်လားလို့ ပြောရ လောက်အောင် အူမြူးနေတတ်တယ်။ ပွဲလမ်းသဘင် ပျော်ပွဲ ရွှင်ပွဲ ကြည့်ဖြစ်မယ်။ ပျော်ပွဲစား အဖွဲနဲ့ ပါသွားရ တတ်တယ်။ အပျော်ကျူးတဲ့နေ့တစ်နေ့ ကံကောင်းတဲ့ နေ့တစ်နေ့ လုပ်ချင်တာ ရဲရဲသာ လုပ်ပါ။
ဒီနေ့ကတော့ လေးဒေါင့်ခြံခတ်ထားတဲ့ အထဲမှာ ပိတ်မိနေသလို မျိုးပဲ။ စိတ်အိုက် လူအိုက် ဖြစ်တတ်တယ်။ အလုပ်တွေ ပိနေတတ်တယ်။ ထွက်ပေါက်မရှိ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ စိတ်အိုက်စရာတွေ ကြုံရတတ်တယ်။
ဒီနေ့ဟာ ဘာပဲလုပ်လုပ် ရည်ရါယ်ချက် မထားပဲ လုပ်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်တွေ ထားပြီး ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် ပျက်သွားတတ်တယ်။ ခရီးထွက်ချင်လည်း ထွက်လိုက်ပါ။ ရောင်းစရာရှိလည်း ရောင်းလိုက်ပါ။ ၀ယ်စရာရှိလည်း ၀ယ်ပစ်လိုက်ပါ။ ဘာကိုမှ စီမံချက်ချပြီး မလုပ်မိပါစေနှင့်။ လုပ်ရင် အကုန်လွဲမှာပဲ။ ဒီနေ့ဟာ မျှော်လင့်ထားတဲ့ ဆီက လာဘ်လာဘ ၀င်မယ်။
ဒီနေ့ဟာ ကိုယ့်အတွက် အလုပ် လုပ်ရတာ နည်းတယ်။ သူတစ်ပါးကို ကူညီရတာ များတယ်။ သူတစ်ပါး အတွက် အချိန် ယူပြီး ကူညီ လုပ်ကိုင်ပေးရတာ များတယ်။ အဲဒီအတွက် ပီတိ ဖြစ်ရတတ်တယ်။ ပြီးတော့ လူငယ် လူရွယ်တွေ ဆိုရင် အချစ်ရေး ကိစ္စတွေ ပေါ်မယ်။ ကိုယ်က သူတစ်ပါးကို ကူညီသလို သူတစ်ပါးက ဒီနေ့မှာ ကိုယ့်ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကူညီမယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာ ရတဲ့ ရလာဒ်ဟာ နောင်အခါမှာ ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီး ကျေးဇူးပြုလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် သူတစ်ပါးက ကိုယ့်ကို ဘယ်လို အကူအညီပဲ တောင်းတောင်း ကူညီဖြစ်အောင် ကူညီလိုက်ပါ။ အရေးကြီးတဲ့ စာချုပ်စာတမ်းတွေ စာချုပ် ချုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ဟာ အကောင်းဆုံးပဲ။
ဒီနေ့ဟာ ကိုယ့်ဟာကို ပုတီးထိုင်ပြီး စိပ်နေရတတ်တယ်။ တရား ထိုင်မိတတ်တယ်။ (သို့) ကိုယ့်ခေါင်းထဲကို မမျှော်လင့်ပဲ အတွေးအခေါ်တွေ ၀င်လာတတ်တယ်။ ပြီးတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း စကားတွေ သတင်းတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ အံ့သြစရာ ကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ တွေ့ကြုံရတတ်တယ်။ ပြီးတော့ သွားလေ့ သွားထ မရှိတဲ့ မိတ်ဆွေအိမ်တွေ အမျတ်မထင် ရောက်သွားတတ်တယ်။ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါလောက်တွေ့တဲ့ မိတ်ဆွေမျိုး ရောက်လာတတ်တယ်။ ၀ါးရှည်နဲ့ ဇီးဖြူသီး ချက်စားရင် ကောင်းမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်မစား ဖြစ်ဘူး။ အဲဒီလို ထူးထူးဆန်းဆန်း အစားအသောက်တွေလဲ ဒီလိုနေ့မှာ စားဖြစ်တယ်။
အဲဒီနေ့မှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ကြေကွဲစရာတွေ ရောက်လာတတ်တယ်။ ဘဝမှာ အရေးကြီးတဲ့ အပြောင်းအလဲ တွေ ဒီလိုနေ့မျိုးမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ ထူးခြားတဲ့ လောကီပညာတွေ ဂန္ဓာရီအတတ်တွေ စပြီး သင်ဖြစ်တယ်။ အိပ်ယာနိုးကတည်းက စိတ်မှာ လေးသလို ထင်နေတတ်တယ်။ ကံကောင်းတဲ့နေ့လို့ မဆိုနိုင်ဘူး။ အရေးကြီးတဲ့ အလုပ်တွေ မလုပ်ဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ဒီနေ့ဟာ အကောင်းဆုံး နေ့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဆိုးဆုံး နေ့လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ခက်ခဲတဲ့ နေ့လည်း ဖြစ်မှာပဲ။ ဘာသာရေး အကြောင်းတွေ စကားစပ်မိပြီး ပြောဖြစ်တတ်တယ်။ ဒီနေ့ဟာ ဘာသာရေး နှင့် ပါတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်မိတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကို ဘုရား ဆင်းတုတော်တွေ ရဟန္တာ ပုံတော်တွေ ရောက် လာတတ်တယ်။ ကိုယ်ကလည်း ဘုရားစေတီတွေ သွားဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့မှာ တစ်ခြား အလုပ်တွေ လုပ်မယ့်အစား တန်ခိုးကြီး ဘုရားကို သွားပြီင်္း ပုတီး စိပ်နေတာ အကောင်းဆုံးပဲ။ အိမ်ကိုလည်း ရဟန်း သီလရှင်တွေ သူတော်ကောင်းတွေ
ရောက်လာတတ်တယ်။ ဂန္ဓာရီဆရာတွေ လောကီပညာရှင်တွေနဲ့ ကြုံရတတ်တယ်။
Credit:Hein Tint Zaw
ကြှနျတျောတို့ ဂဏနျးဗဒေငျပညာမှာ ဘယျနကေို့ ဘာဖွဈမယျဆိုတာကို တှကျလို့ရတဲ့ တှကျနညျး ရှိပါတယျ။ ဟိုတဈနကေ့ အှနျးလိုငျးမိတျဆှေ တဈယောကျနဲ့ စကားပွောဖွဈတော့ သူက ကြှနျတေျာ့ကို ဒီလို ပွောပါတယျ။
ဆရာတဲ့ အဘမငျးသိင်ျခ မရှိတော့ပမေယျ့ ဆရာကွီးရဲ့ ပညာရပျတှကေို အခုလို ဖွနျ့ဝပေေးတာ
ကြေးဇူးပါပဲတဲ့။ ကြှနျတျောတို့က အဘမငျးသိင်ျခရဲ့ အဝေးရောကျ တပညျ့တှဆေို မမှားပါဘူးတဲ့။ ဆရာကွီး မငျးသိင်ျခရဲ့ စာအုပျတှဆေို မလှတျတမျးဖတျတယျတဲ့။ စာအုပျထဲမှာ ပါတဲ့ ဗဒေငျတှကျနညျးတှဆေို အမွဲတမျးလကေ့ငျြ့ပွီး တှကျနကွေတဲ့။ မိတျ ဆှတှေေ အမတှဆေိုလညျး တှကျခိုငျးလို့ အမွဲတမျး တှကျပေးနကွေတဲ့။
အဲဒီမှာ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးအတှကျ အရမျးမှနျကနျတဲ့ ဗဒေငျတှကျနညျး တဈခုရှိတယျ။ ဂဏနျးဗဒေငျ တှကျနညျးပါဆရာ။ ဆရာတော့ သိမလား မသိဘူး။ ရောကျဆဲ ရကျ လ ခုနှဈထဲက ကိုယျ့ရဲ့ မှေးရကျ မှေးလ မှေးခုနှဈကို နှုတျ။ တဈခုထဲ ရအောငျပေါငျးတယျ။ ရတဲ့ ဂဏနျးကို ကွညျ့ပွီး ဒီနကေ့ ကောငျးတယျ မကောငျးဘူး။ ဘာဖွဈနိုငျတယျ ဆိုတာကို တှကျယူလို့ရတဲ့ နညျးလေးပါ။ ဆရာ သိတယျ မဟုတျလားဆိုတော့..
ကြှနျတျောကလညျး သိတာပေါ့ဗြာ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဘဝမှာ အရမျးအရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စတှဆေိုရငျ ဒီနညျးနဲ့ပဲ တှကျကွညျ့ပွီး လုပျနကွေပေါ့လို့ ပွနျပွောလိုကျတယျ။ အဲဒီတော့ သူကလညျး အရမျးမှနျတာပဲ ဆရာရယျတဲ့။ ကြှနျတျောဆိုရငျ အဲဒီနညျးနဲ့ တှကျကွညျ့လို့ မကောငျးဘူးဆိုရငျ ဘာအလုပျမှ မလုပျတော့ဘူးတဲ။ အဲဒါနဲ့ ကြှနျတျောလညျး စိတျကူးတဈခုရတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဆိုကျကို လာရောကျလညျပတျကွတဲ့ မိတျဆှတှေေ အတှကျ ဒီဏနျးဗဒေငျ တှကျနညျးလေး တငျရရငျ ကောငျးမှာပဲဆိုတဲ့ ဖွူစငျသောနှလုံးဖွငျ့ ဒီပို့လေးကို တငျလိုကျတာ ဖွဈပါကွောငျး.......
တှကျနညျးကတော့ လှယျပါတယျ။ ရောကျဆဲ ခုလရကျထဲကနေ မိမိရဲ့ မှေးရကျ မှေးလ မှေးသက်ကရာဇျကို နှုတျ။ တဈလုံးထဲ ရအောငျပေါငျးပေါ့။ အောကျမှာ တဈကနေ ကိုးအထိ ဘာဂဏနျးရရငျ ဘာဖွဈမယျဆိုတာကို အတိအကြ ရေးထားတဲ့ ဟောကိနျးတှေ ပါပါတယျ။ အားလုံးသောသူမြား ကနြေပျ ပြျောရှငျကွလိမျ့မညျဟု မြှျောလငျ့ပါတယျဗြာ။
အကွံအစညျသဈတှေ၊ လုပျငနျးသဈတှေ၊ အတှအေ့ကွုံသဈတှေ ရောကျလာလိမျ့မယျ။ အိပျယာကနိုးပွီး မကျြလုံး နှဈလုံး ပှငျ့ကတညျးက ငါ တဈခုခုတော့ ရတော့မှာပဲလို့ စိတျမှာ ပိုကျထားပါ။ မုခြ တဈခုခု ရရှိပါလိမျ့မညျ။
ဒီနဟေ့ာ ဘယျသူတှေ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျကကွားကနပွေီး ဝငျပွီး ဖွနျဖွပေေးရတတျတယျ။ ဝေးကှာနတေဲ့ လူနှဈယောကျအတှကျ ကိုယျက ဆကျသှယျပေးရတတျတယျ။ ဒီနဟေ့ာ ဘယျလို အကွောငျးအရာတှပေဲ ပွောပွော ကိုယျပွောသမြှကို ဘယျသူကမှ မဟုတျဘူးလို့ မပွောပဲ လကျခံ၇မယျ့ နဖွေ့ဈတယျ။ အမှနျကတော့ ဒီနဟေ့ာ နှဈဦးနှဈဖကျ အုပျစုနှဈခုကို ပွပွေလေညျလညျ ဖွဈသှားအောငျ ဖနျြ့ဖွပေေးရတဲ့ နမြေို့းပဲ။ ပွီးတော့ ဘာကိုပဲ လုပျလုပျ ကံတရားက ကိုယျ့ကို မကျြနှာသာပေးတဲ့နမြေို့း ဖွဈတယျ။
ဒီနဟေ့ာ အူမွူးတဲ့နေ့ ဖွဈတယျ။ ဘေးက ကိုယျ့ကို ကွညျ့နတေဲ့ လူတှတေောငျ အူမွူးလှခဉျြလားလို့ ပွောရ လောကျအောငျ အူမွူးနတေတျတယျ။ ပှဲလမျးသဘငျ ပြျောပှဲ ရှငျပှဲ ကွညျ့ဖွဈမယျ။ ပြျောပှဲစား အဖှဲနဲ့ ပါသှားရ တတျတယျ။ အပြျောကြူးတဲ့နတေ့ဈနေ့ ကံကောငျးတဲ့ နတေ့ဈနေ့ လုပျခငျြတာ ရဲရဲသာ လုပျပါ။
ဒီနကေ့တော့ လေးဒေါငျ့ခွံခတျထားတဲ့ အထဲမှာ ပိတျမိနသေလို မြိုးပဲ။ စိတျအိုကျ လူအိုကျ ဖွဈတတျတယျ။ အလုပျတှေ ပိနတေတျတယျ။ ထှကျပေါကျမရှိ ဖွဈနတေတျတယျ။ စိတျအိုကျစရာတှေ ကွုံရတတျတယျ။
ဒီနဟေ့ာ ဘာပဲလုပျလုပျ ရညျရါယျခကျြ မထားပဲ လုပျပါ။ ရညျရှယျခကျြတှေ ထားပွီး ငါဘာလုပျရမလဲဆိုရငျ ပကျြသှားတတျတယျ။ ခရီးထှကျခငျြလညျး ထှကျလိုကျပါ။ ရောငျးစရာရှိလညျး ရောငျးလိုကျပါ။ ဝယျစရာရှိလညျး ဝယျပဈလိုကျပါ။ ဘာကိုမှ စီမံခကျြခပြွီး မလုပျမိပါစနှေငျ့။ လုပျရငျ အကုနျလှဲမှာပဲ။ ဒီနဟေ့ာ မြှျောလငျ့ထားတဲ့ ဆီက လာဘျလာဘ ဝငျမယျ။
ဒီနဟေ့ာ ကိုယျ့အတှကျ အလုပျ လုပျရတာ နညျးတယျ။ သူတဈပါးကို ကူညီရတာ မြားတယျ။ သူတဈပါး အတှကျ အခြိနျ ယူပွီး ကူညီ လုပျကိုငျပေးရတာ မြားတယျ။ အဲဒီအတှကျ ပီတိ ဖွဈရတတျတယျ။ ပွီးတော့ လူငယျ လူရှယျတှေ ဆိုရငျ အခဈြရေး ကိစ်စတှေ ပျေါမယျ။ ကိုယျက သူတဈပါးကို ကူညီသလို သူတဈပါးက ဒီနမှေ့ာ ကိုယျ့ကို ထိုကျထိုကျတနျတနျ ကူညီမယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနမှေ့ာ ရတဲ့ ရလာဒျဟာ နောငျအခါမှာ ကိုယျ့ကို ပွနျပွီး ကြေးဇူးပွုလိမျ့မယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတဈပါးက ကိုယျ့ကို ဘယျလို အကူအညီပဲ တောငျးတောငျး ကူညီဖွဈအောငျ ကူညီလိုကျပါ။ အရေးကွီးတဲ့ စာခြုပျစာတမျးတှေ စာခြုပျ ခြုပျမယျဆိုရငျ ဒီနဟေ့ာ အကောငျးဆုံးပဲ။
ဒီနဟေ့ာ ကိုယျ့ဟာကို ပုတီးထိုငျပွီး စိပျနရေတတျတယျ။ တရား ထိုငျမိတတျတယျ။ (သို့) ကိုယျ့ခေါငျးထဲကို မမြှျောလငျ့ပဲ အတှေးအချေါတှေ ဝငျလာတတျတယျ။ ပွီးတော့ ထူးထူးဆနျးဆနျး စကားတှေ သတငျးတှေ ရောကျလာတတျတယျ။ အံ့သွစရာ ကောငျးတဲ့ အဖွဈအပကျြတှေ တှကွေုံ့ရတတျတယျ။ ပွီးတော့ သှားလေ့ သှားထ မရှိတဲ့ မိတျဆှအေိမျတှေ အမတျြမထငျ ရောကျသှားတတျတယျ။ တဈနှဈမှာ တဈခါလောကျတှတေဲ့ မိတျဆှမြေိုး ရောကျလာတတျတယျ။ ဝါးရှညျနဲ့ ဇီးဖွူသီး ခကျြစားရငျ ကောငျးမယျဆိုတာ သိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခကျြမစား ဖွဈဘူး။ အဲဒီလို ထူးထူးဆနျးဆနျး အစားအသောကျတှလေဲ ဒီလိုနမှေ့ာ စားဖွဈတယျ။
အဲဒီနမှေ့ာ စိတျညဈစရာတှေ ကွကှေဲစရာတှေ ရောကျလာတတျတယျ။ ဘဝမှာ အရေးကွီးတဲ့ အပွောငျးအလဲ တှေ ဒီလိုနမြေို့းမှာ ဖွဈတတျတယျ။ ထူးခွားတဲ့ လောကီပညာတှေ ဂန်ဓာရီအတတျတှေ စပွီး သငျဖွဈတယျ။ အိပျယာနိုးကတညျးက စိတျမှာ လေးသလို ထငျနတေတျတယျ။ ကံကောငျးတဲ့နလေို့ မဆိုနိုငျဘူး။ အရေးကွီးတဲ့ အလုပျတှေ မလုပျဖွဈဖို့ အရေးကွီးတယျ။
ဒီနဟေ့ာ အကောငျးဆုံး နလေ့ညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ အဆိုးဆုံး နလေ့ညျး ဖွဈနိုငျတယျ။ ဆုံးဖွတျခကျြ ခကျခဲတဲ့ နလေ့ညျး ဖွဈမှာပဲ။ ဘာသာရေး အကွောငျးတှေ စကားစပျမိပွီး ပွောဖွဈတတျတယျ။ ဒီနဟေ့ာ ဘာသာရေး နှငျ့ ပါတျသကျတဲ့ ကိစ်စတှေ ဆောငျရှကျမိတယျ။ ကိုယျ့အိမျကို ဘုရား ဆငျးတုတျောတှေ ရဟန်တာ ပုံတျောတှေ ရောကျ လာတတျတယျ။ ကိုယျကလညျး ဘုရားစတေီတှေ သှားဖွဈတယျ။ ဒီနမှေ့ာ တဈခွား အလုပျတှေ လုပျမယျ့အစား တနျခိုးကွီး ဘုရားကို သှားပွီင်္း ပုတီး စိပျနတော အကောငျးဆုံးပဲ။ အိမျကိုလညျး ရဟနျး သီလရှငျတှေ သူတျောကောငျးတှေ
ရောကျလာတတျတယျ။ ဂန်ဓာရီဆရာတှေ လောကီပညာရှငျတှနေဲ့ ကွုံရတတျတယျ။